आखिर यी शिक्षिका बालकले दिएका पेन्सिल देख्नासाथ किन यत्ति धेरै भाबुक भईन् ! कारण यस्तो रहेछ !!
Posted on January 21, 2019 by T NP
ब्युमोन्ट, ७ माघ । सामाजिक संजालमा पोस्ट भएको एक शिक्षिकाको अनुभूतिलाई यतिबेला लाखौँले शेयर गरेका छन् । उनले कक्षामा पढाउँदै गर्दा घटेको यो घटनाको बारेमा उनि चुपचाप बस्न सकिनन् र त्यहीं घटनाले उनको मानस्पटलमा स्पर्श गर्दा जन्मिएका अनुभूतिलाई उनले सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी हुन् ।
अमेरिकाको ब्युमोन्ट शहरकी शिक्षिका अमाण्डा कक्सले पेशाले एक शिक्षिका हुन् । अमाण्डाका अनुसार एक दिन कक्षामा पढाउँदै गर्दा उनीसँग पेन्सिल केही कम थिए । त्यसपछि उनले विद्यार्थीहरुसँग कसैसँग थप पेन्सिल भए दिन आग्रह गरिन् । त्यसपछि जे भयो त्यसले ती शिक्षिका निकै भावुक भइन् ।
अमाण्डाको कुरा सुनेपछि एक छात्र उनीछेउ आए । उनीसँग केही पेन्सिल थिए जो उनी साथीहरुसँग शेयर गर्न चाहन्थे । अमाण्डाले पेन्सिल लिएर तिनीहरुको चुच्चो बनाउन लागिन् ।
यस क्रममा अचानक उनले ख्याल गरिन् कि पेन्सिलमा केही लेखिएको थियो । ती पेन्सिल साधारण होइन धेरै खास किसिमका थिए । ती पेन्सिलमा ती बालककी आमाले निकै प्रेरणादायी वाक्यहरु लेखेकी थिइन् । यी सन्देशमार्फत बालकको आत्मविश्वास बढाउने कोसिस गरिएको थियो । ती सन्देश पढेर अमाण्डा निकै भावुक भइन् ।
अमाण्डाका अनुसार ती सन्देशका कारण ती बालक आत्मविश्वास र उत्साहले भरिपूर्ण देखिएका थिए । अमाण्डाले ती सन्देशहरु हरेक अभिभावक र शिक्षकले बालबालिकालाई अनिवार्य सिकाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
जब यी युवतीले आफ्नो कपडामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको वीर्यको दाग संसारलाई देखाइन्…अनि भयो हंगामा
के तपाई नियमित हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? हस्तमैथुन गर्नुका फाइदाहरु !